နောက်ဆုံးရ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်သတင်းများ စုစည်းမှု – ၂၃.၁၀.၂၀၂၀ – Sports A2Z
–	မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းနည်းပြ ဆိုးလ်ရှားရဲ့ လူငယ်တိုက်စစ်မှူး ဂရင်းဝုဒ် ပြဿနာကို ထုတ်ပြောခဲ့တာဟာ သူ့ကို အပြစ်ပေးထားတဲ့ ကာလ ကုန်ဆုံးသွားပြီလို့ အရိပ်အမြွက်ဆိုလိုက်တာဖြစ်ကြောင်း ပရိသတ်တွေက ခန့်မှန်းနေကြပြီး ချဲလ်ဆီးနဲ့ပွဲမှာ ပါဝင်လာဖို့ မျှော်လင့်နေကြ။
–	ယူနိုက်တက်ဂန္ထဝင်နဲ့ အသင်းရဲ့ ယာယီနည်းပြဟောင်း ရိုင်ယန်ဂစ်က တိုက်စစ်မှူး အက်ဒင်ဆန် ကာဗာနီအနေနဲ့ ဘရူနို ဖာနန်ဒက်စ်ကို ခေါ်ယူခဲ့တုန်းကလိုပဲ တူညီတဲ့ သက်ရောက်မှုနဲ့ အကျိုးပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းသွား။
–	ဘွန်ဒက်စ်လီဂါကလပ် မွန်ချန်ဂလာဘက်ခ်ျမှာ ခြေစွမ်းပြနေခဲ့တဲ့ ဆွစ်ဇာလန်လက်ရွေးစင်ကွင်းလယ်လူ ဒင်းနစ် ဇာကာရီးယားကို ခေါ်ယူဖို့ ချဲလ်ဆီးအသင်းနဲ့အပြိုင် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်း ဇန်နဝါရီမှာ ကြိုးစားသွားဖွယ်ရှိ။
–	မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဆီ အငှားနဲ့ ရောက်ရှိနေတဲ့ တိုက်စစ်မှူး အိုဒီယွန် အီဂါလိုက နိုင်ဂျီးရီးယားအစိုးရဟာ ကမ္ဘာ့အလယ်မှာ အရှက်ရစရာလုပ်ရပ်တွေကို ကျူးလွန်နေတယ်လို့ ရဲအဖွဲ့ရဲ့ ဆန္ဒပြသူတွေကို ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းကိုင်တွယ်ခဲ့ပုံကို ဝေဖန်။
–	မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ ဒီရာသီကို အပျော်တမ်းအသင်းတစ်သင်းလို စတင်ခဲ့တယ်လို့ ဒေးလီးစတားသတင်းဌာနက ဝေဖန်လိုက်ပြီး လက်ရှိမှာတော့ ဆိုးလ်ရှားအနေနဲ့ ပြန်လည်တည့်မတ်နိုင်ပုံပေါ်ကြောင်း သုံးသပ်။
–	နယူးကာဆယ်လ်ယူနိုက်တက်အသင်းအနေနဲ့ မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ အရန်ခုံတန်းမှာ လစာကြီးကြီးနဲ့ ထိုင်တတ်တဲ့ အင်္ဂလန်နောက်ခံလူ ဖီးလ်ဂျုံးစ်ကို ခေါ်ယူဖို့ လာမယ့်ဆောင်းရာသီအပြောင်းအရွှေ့ဈေးကွက်မှာ ကြိုးစားဖို့ရှိနေ။
–	အဲရစ် ဘိုင်လီဟာ တစ်ရာသီမှာ နှစ်ပွဲသုံးပွဲကစားပြီး ပွဲ ၂၀-၃၀ လောက် ဒဏ်ရာနဲ့ အနားယူနေရတာဟာ တကယ့်ကို ရယ်စရာဖြစ်ပြီး အသင်းအနေနဲ့ အမြန်ဆုံး ရောင်းချသွားဖို့ ပရိသတ်တွေက တိုက်တွန်းလိုက်ပြီး “Mr. Glass”လို့လည်း နာမည်ပေးသွား။
–	မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးနညျးပွ ဆိုးလျရှားရဲ့ လူငယျတိုကျစဈမှူး ဂရငျးဝုဒျ ပွဿနာကို ထုတျပွောခဲ့တာဟာ သူ့ကို အပွဈပေးထားတဲ့ ကာလ ကုနျဆုံးသှားပွီလို့ အရိပျအမွှကျဆိုလိုကျတာဖွဈကွောငျး ပရိသတျတှကေ ခနျ့မှနျးနကွေပွီး ခြဲလျဆီးနဲ့ပှဲမှာ ပါဝငျလာဖို့ မြှျောလငျ့နကွေ။
–	ယူနိုကျတကျဂန်ထဝငျနဲ့ အသငျးရဲ့ ယာယီနညျးပွဟောငျး ရိုငျယနျဂဈက တိုကျစဈမှူး အကျဒငျဆနျ ကာဗာနီအနနေဲ့ ဘရူနို ဖာနနျဒကျဈကို ချေါယူခဲ့တုနျးကလိုပဲ တူညီတဲ့ သကျရောကျမှုနဲ့ အကြိုးပွုနိုငျလိမျ့မယျလို့ ခနျ့မှနျးသှား။
–	ဘှနျဒကျဈလီဂါကလပျ မှနျခနျြဂလာဘကျချြမှာ ခွစှေမျးပွနခေဲ့တဲ့ ဆှဈဇာလနျလကျရှေးစငျကှငျးလယျလူ ဒငျးနဈ ဇာကာရီးယားကို ချေါယူဖို့ ခြဲလျဆီးအသငျးနဲ့အပွိုငျ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျး ဇနျနဝါရီမှာ ကွိုးစားသှားဖှယျရှိ။
–	မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျဆီ အငှားနဲ့ ရောကျရှိနတေဲ့ တိုကျစဈမှူး အိုဒီယှနျ အီဂါလိုက နိုငျဂြီးရီးယားအစိုးရဟာ ကမ်ဘာ့အလယျမှာ အရှကျရစရာလုပျရပျတှကေို ကြူးလှနျနတေယျလို့ ရဲအဖှဲ့ရဲ့ ဆန်ဒပွသူတှကေို ကွမျးကွမျးတမျးတမျးကိုငျတှယျခဲ့ပုံကို ဝဖေနျ။
–	မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ ဒီရာသီကို အပြျောတမျးအသငျးတဈသငျးလို စတငျခဲ့တယျလို့ ဒေးလီးစတားသတငျးဌာနက ဝဖေနျလိုကျပွီး လကျရှိမှာတော့ ဆိုးလျရှားအနနေဲ့ ပွနျလညျတညျ့မတျနိုငျပုံပျေါကွောငျး သုံးသပျ။
–	နယူးကာဆယျလျယူနိုကျတကျအသငျးအနနေဲ့ မနျခကျြစတာယူနိုကျတကျအသငျးရဲ့ အရနျခုံတနျးမှာ လစာကွီးကွီးနဲ့ ထိုငျတတျတဲ့ အင်ျဂလနျနောကျခံလူ ဖီးလျဂြုံးဈကို ချေါယူဖို့ လာမယျ့ဆောငျးရာသီအပွောငျးအရှဈေ့ေးကှကျမှာ ကွိုးစားဖို့ရှိနေ။
–	အဲရဈ ဘိုငျလီဟာ တဈရာသီမှာ နှဈပှဲသုံးပှဲကစားပွီး ပှဲ ၂၀-၃၀ လောကျ ဒဏျရာနဲ့ အနားယူနရေတာဟာ တကယျ့ကို ရယျစရာဖွဈပွီး အသငျးအနနေဲ့ အမွနျဆုံး ရောငျးခသြှားဖို့ ပရိသတျတှကေ တိုကျတှနျးလိုကျပွီး “Mr. Glass”လို့လညျး နာမညျပေးသှား။